သတင်းသမားကျင့်ဝတ် Ethicနဲ့ ညီရဲ့လား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » သတင်းသမားကျင့်ဝတ် Ethicနဲ့ ညီရဲ့လား
သတင်းသမားကျင့်ဝတ် Ethicနဲ့ ညီရဲ့လား
Posted by padonmar on Jul 4, 2013 in Creative Writing, Opinions & Discussion | 26 comments
သူကြီးက ကျမတို့ ရွာသူားတွေကို မြှောက်မြှောက်ပေးနေတယ်။
Citizen Journalist CJ တွေတဲ့။
ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်း စိတ်ကြီးဝင် စီဂျေကြီးထင်မိ၊
တစ်ခုခု မျက်စိထဲ အမြင်မတော်၊အကြားမတော်ရင်လည်း မှတ်တမ်းတင်ချင် ရွာထဲကတစ်ဆင့် ပြည်သူကို တိုင်တည်ချင်မိ၊
တစ်ခုခု သဘောကျ နှစ်ခြိုက်မိရင်လည်း (အစားကောင်းစားရရင် ချစ်သူတွေကို သတိရဆိုသလို) ရွာသူားတွေက တစ်ဆင့် ပြည်သူကို ပြောပြချင်မိ၊
အဲသလို သတင်းသမားလုပ်ချင်မိတော့ သတင်းသမားရဲ့ ကျင့်ဝတ်လေးတွေတော့ နည်းနည်းပါးပါး တီးကြည့်ခေါက်ကြည့်လေ့လာကြည့်မိပါတယ်။
အနီးစပ်ဆုံးက ရွာထဲက ဆရာထက်ဝေးရဲ့ မျက်နှာစာအုပ်ပေါ်က စတေးတပ်စ်တွေပါပဲ။
သတင်းသမား သည် ကြားရတိုင်း သတင်း မဟုတ်၊ ဘယ်မှာပင်ကြားရစေ မှန်၊မမှန် ဆင်ခြင်စဉ်းစား အတည်ပြုတတ်ရန် အရေးကြီးဆုံး ပင်ဖြစ်သည်။သတင်းကြောင့် တိုးတက်မူများ ဖြစ်နိုင်သလို သတင်းကြောင့် ပင် ဆုံးရှုံး နှစ်နာမူများ လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။သတင်းတွင် အရေးကြီးဆုံး ပေါ်လွင် ထင်ရှား သိသာနိုင်သည့်အရာမှာ ဓါတ်ပုံ ဖြစ်ပါသည်။
သတင်းသမားသည် ကိုယ်နှင့်မတူ ကိုယ့်ရန်သူဟူသော အစွန်းရောက်သည့်နိမ့်ပါးသည့်စိတ် မထားရပေ။သတင်းသမားသည် စိတ်ဖြူရမည်။ တည်ငြိမ်ရမည် သတိရှိရှိနေရမည်
ဟုဆိုချင်ပါသည်။မိမိရေးသားဖေါ်ပြချက်သည် အများအတွက် အကျိုးရှိပြီး တရားမျှတမူ ၊သာတူညီမျှ ရှိမူ၊စိတ်နှလုံးကောင်းမူဖြင့်သာ သတင်းများရေးသားရမည်။
စာနယ်ဇင်းများသည် တမင်ကြံရွယ်တွက်ဆလျှက် ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး မုန်းတီးမူများကို လှုံဆော်ခြင်းမပြုရ ၊ ဇာတိကိုသော်လည်းကောင်း ၊ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာကိုလည်းကောင်း ၊လူမျိုးကိုသော်လည်းကောင်း အကြောင်းပြု၍ မတရားဝေဖန်ရေးသားခြင်းမပြုရ ” ဟူ၍စာနယ်ဇင်း ကျင့်ဝတ်ရှိသည်။
သတင်းဓာတ်ပုံဆိုရာမှာလည်း သိသလောက်တော့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ ကို ထိခိုက်စေမယ့် သတင်းမျိုးမှာ မျက်နှာကို အမည်းလိုင်းလေးဖုံးပြီး အုပ်ပေးထားရပါတယ်။
တရားရုံးက မစီရင်မချင်း သူ့ကို တရားခံ အစစ်လို့ သတ်မှတ်လို့မရပါဘူး။
မလိုအပ်ရင် နာမည်၊အဖေနာမည်တွေကို ကွက်လပ်ချန်ပြီး ဖော်ပြပေးရပါတယ်။
အထူးသဖြင့် မုဒိန်းမှုဖြစ်ရင် ခံရသူမိန်းကလေးဟာ လူနစ်နာရတဲ့အပြင်
နာမည်ပါ လူသိရှင်ကြားအဖြစ်မခံထိုက်တဲ့အတွက် မိန်းကလေးနာမည်၊အဖေနာမည်ကို လုံးဝ ထုတ်ဖော်မပြောသင့်ပါဘူး၊
အခုတလော ကပြီးသား ပြဇာတ်တစ်ပုဒ် ပြန်ကပြနေသလို ဖြစ်နေတဲ့ ဒုတိယမ္ပိ ရခိုင်အရေးမှာ
ကျမတို့ နေ့စဉ်ကြည့်နေရတဲ့ သတင်းမီဒီယာ က
မုဒိန်းကျင့်ခံရတဲ့ မိန်းကလေးအမည်၊အဘအမည်၊နေရပ်လိပ်စာ နဲ့ တကွ
မိန်းကလေးရဲ့ ရှေ့ကနေ ရိုက်ထားတဲ့ မျက်နှာအပြည့် ဒူးလောက်ထိပုံပါတင်ထားတာတွေ့ရတော့
ဒီသတင်းမှန်ကြောင်း ဒီလောက်တောင် မိန်းကလေးရဲ့ အရှက်ကို ခွဲပြီး သက်သေပြနေဖို့ လိုအပ်ရဲ့လားလို့ တွေးမိပါတယ်။
ကိုယ့်နှစ်မသားချင်းများသာဆိုရင် ဒီလိုပဲ သတင်းမှန်ပါဆိုပြီး တင်ပေးမှာလား။
သတင်းရဲ့ source က Arakan Events လို့ တပ်ထားပါတယ်။
ရခိုင်အမျိုးသမီးလေးကို ထပ်ပြီးတော့ နှစ်လိုက်တဲ့ ရခိုင်မီဒီယာ ဖြစ်နေပြီလားလို့လည်း စဉ်းစားမိပါတယ်။
သတင်းဆို ဦးရင် ထူးရင်ပြီးရော ဘာကျင့်ဝတ်မှ လိုက်နာစရာမလိုတဲ့ ခေတ်များရောက်နေတယ်ဆိုရင်တော့
ကျမလည်း စီဂျေ မဖြစ်ချင်တော့ပါဘူး။
မိန်းမသားဘဝ စာနာမှုမရှိတဲ့ ဒီလို ခေတ်မှာ နေရမှာလည်း ကြောက်မိပါတယ်။
ထူး ရင်​ပြ ီး​ရောဆိုပြ ီး​ရေး​နတော​လေး​တေွ သတိထားမိပါရဲ့
​ရေနစ်​​သေတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ ဝစလစ်​စလစ်​ နီးပါးပုံ။
သတင်​းစာနယ်​ဇင်​းနဲ့ပါတ်​သက်​ပြီး ကျင်​့ဝတ်​ ၊လုပ်​ထုံးလုပ်​နည်​း​လေး​တွေကို
နိုင်​ငံတကာအဆင်​့ နီးပါးမှီ​အောင်​ သင်​တန်​း​လေး​တွေ လုပ်​​ပေးနိုင်​ကြရင်​​ကောင်​းမယ်​ထင်​တာပဲ ။
မှတ်​မှတ်​ရရ ကျ​နော့မိတ်​​ဆွေ ကားအက်​စီးဒင်​့ဖြစ်​တုန်​းက သူ့ကားကို ည ၁ နာရီခွဲ​လောက်​ကြီးကိုဓာတ်​ပုံအ​ပြေးလာရိုက်​ပါတယ်​
ပြီး​တော့ဂျာနယ်​ထဲ ထည်​့မယ်​​ပြောလို့ အဲဒီဓတ်​ပုံကို
အာဒ​ကေ ​ပြေးပြီး ပြန်​ဝယ်​ခဲ့ရတာပါ
ဆရာ​တွေက အဲဒီလို ဗျို့ …..
ကျနော့် အဖိုးသိမ်းထားတဲ့ ၁၉၆ဝ တစ်ဝိုက်က သတင်းဂျာနယ်တွေ ဖတ်ရဖူးတယ်
မုဒိန်းမှု့တွေ အိမ်ထောင်ရေးဖေါက်ပြန်တဲ့ ကိစ္စတွေ၊ သမီးရည်းစားကိစ္စတွေ ကို သေသေချာချာ ရှာဖွေဆက်စပ်ပြီးမှ
ဇတ်လမ်းဇတ်အိမ်အခိုင်အခံ့နဲ့ တစ်တစ်ခွခွ ရေးထားတဲ့ မျက်နှာဖုံးသတင်းတွေ အင်မတန်ခေတ်စားတာပေါ့။
နာမည်၊ လိပ်စာ ၊ အလုပ်အကိုင် အတိအကျနဲ့ လူပုံတွေပါ ရအောင်ထည့်တာ။
အဲဒီတုန်းက ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီခေတ်လေ…
ကိုယ့်သတင်းထူးရင်ပြီးရော ကိုယ့်တိုက်နာမည်တက်ရင်ပြီးရောဆိုပြီး ကန့်ကွက်ချင်ကန့်ကွက်၊ ဆဲချင်ဆဲ၊ တရားပါစွဲချင်စွဲ – ဆိုတဲ့စိတ်ဓါတ်မျိုးတွေနဲ့ ပြိုင်ဆိုင်ကြတာပေါ့…။
အခုလဲ သတင်းခေတ်၊ သတင်းနဲ့ နာမည်ယူမယ့်ခေတ်ရောက်လာတယ်ဆိုတော့
ပြီးတော့ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်လဲ အတန်အသင့်ရပြီဆိုတော့….
သိက္ခာမဲ့တဲ့ သတင်းသမားတွေ သတင်းဂျာနယ်တွေ ရှိလာမှာပါ….။
စာနဲ့ရေးထားသည်ဖြစ်စေ။ မရေးထားလဲ နားလည်မှု့အရ ဖြစ်စေ
လွတ်လပ်ရေးရစကပေါ့ဗျာ ..သင်္ကြန်မှာ မိန်းမတယောက် ရင်သားဖော်ပြီး ရေအပက်ခံတယ်..
မီဒီယာက အဲ့ဒါကို ရိုက်ပြီးတင်တယ်.. ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာ ရှာလို့ရလောက်အောင်
ပြတ်သားနေတော့ .. အဲ့မိန်းမ ထောင်ကျသွားတယ်.. မီဒီယာလည်း အက်သစ် မရှိဘူးလို့
ပက်ပက်စက်စက် ဝေဖန်ခံထိတယ်.. ဆိုလိုသည်မှာ .. မီဒီယာအနေနဲ့ မီးမောင်းထိုးပြရမှာသည်
သရုပ်ပျက် ယဉ်ကျေးမှု ထွန်းကားလာတယ် ဆိုတာကိုပဲ ..ပါဆင်နယ် အတက်ခ် ဖြစ်သွားလို့မရဘူး
သရုပ်တွေပျက်ကြတဲ့အထဲမှာမှ မောင်ရှင်တယောက်ပဲ ကျွန်းညိုမှာ ခြေချုပ်မိသလို ဖြစ်အောင် မလုပ်စကောင်းဘူး ဆိုတာရယ်ပါ။
မနေ့က တစ်ပူး သတင်းဖတ်ရတယ်.. အတော်လေး မနှစ်သက်ဘူး ခည (ပါဆင်နယ်အမြင်)
သိတဲ့အတိုင်း ဟိုကီလားလေး ဆေးချတဲ့ကိစ္စ..။ဘာတဲ့ ဆေးခြောက်ဟုယူဆရသော အရွက် ၁ကျပ်သားခန့်ဖြင့်တဲ့
ရေးထားတဲ့စာက။ ငတိ အကုပ်ခံရချိန်နဲ့ သတင်းတက်တဲ့အချိန် အနည်းလေး နာရီ ၂ဝ ကွာရဲ့..။
ရော်တကဲ ဆိုတဲ့ ဘဲတွေ သစ်ရွက်လေး၁ကျပ်သားကိုမှ ၁ရက်လောက်ကြာအောင် ဆေးခြောက်လား
သစ်ရွက်လား မသိရင်တော့ အကုန်လုံး ပြုတ်သင့်ပြီ
ဆေးခြောက်ဖြင့်ဆေးခြောက်ပေါ့ ဘိန်းဖြင့်ဘိန်းပေါ့ ဗျာ ..ဘာဖစ်တုန်း နောင်တချိန်
မဟုတ်ပါဘု မလုပ်ပါဘု မင်းထင်သလိုငါ မရှုပ်ပါဘု ဟုတ်တာတခုထုတ်ကာပြောမယ် သစ်ရွက်ဆိုတာ ဒိုင်ယာရီထဲညှပ်တဲ့
စွယ်တော်ရွက် ၁ကျပ်သားပါ လုပ်ချင် သလားမဆိုနိုင်..။
တခါက ဖတ်ဖူးတာလေးပါ.. ဘာတဲ့.. လူကျွံသွားသလိုဖြစ်ဟန်ရှိသဖြင့် ဒိုင်မှ ခရာတွတ်သည် မရေးကောင်း
လူကျွံဘော ဖြစ်သည် လို့ ရေး ရမယ်တဲ့.. မှားရင် နောင်အခါ ပြန်တောင်းပန်တဲ့။
တာဝန်ယူစိတ်ပေါ့ဗျာ။ အဲ့ဒါလိုနေတယ် ထင်တာပဲ။
ဒီကွန်းမန့်ကိုချုပ်ရရင် ထိပ်ဆုံးက ကေ့စ်တွေက ငါမီဒီယာပဲကွဆိုပီး ဘယ်သူနစ်နာနစ်နာ လက်တဆုံးသမတာ
တစ်ပူးလိုကိစ္စကတော့ ကိုယ်အန်ဒရယ်ကင်းရင်ပီးရော ရေးတာ လို့ မြင်ပါရဲ့..။
လူထု ဦးစိန်ဝင်းလို သတင်းသမားမျိုးကို လွမ်းမိပါရဲ့အေ။
လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
လူအများကို ဗဟိုပြုပြီး လုပ်ကိုင်နေရတဲ့ သတင်းမီဒီယာသမားတွေအနေနဲ့ ဖြောင့်မတ်တဲ့ စိတ်အခြေခံရှိဖို့ လိုပါတယ်။
သတင်းသမားတွေရဲ့ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရွာထဲမှာ သတင်းသမားငြိမ်းကျော် (ထင်ပါတယ်) ရေးခဲ့ဖူးတွေလည်း အတော်လေး မှတ်သားစရာ ကောင်းတယ်။
သူကိုယ်တိုင်ကျင်လည်နေရတဲ့ သတင်းလောကကို ကောင်းစေချင်တဲ့ စိတ်အခြေခံနဲ့ ကိုယ်တိုင်လည်း ကောင်းအောင်ကျင့်နေတဲ့ သတင်းသမားတစ်ယောက်လို့ မြင်မိပါတယ်။
အဲလို သတင်းသမားတွေများပြားလာမှ လူ့ဘောင်ကောင်းကျိုးအတွက် မီဒီယာတွေကို အားကိုးလို့ရလာမယ်။
သတင်းတုတွေ များလာတော့ လူတွေကမယုံ။
မယုံတော့ သက်သေပြ ဆိုပြီး ပုံတွေ ရုပ်သံ
အထောက်အထားတွေ ပါမှ လက်ခံချင်ကြတယ်။
ဒီတော့ ပုံတွေ ရုပ်သံတွေပါတင်လာကြတယ်။
တချို့လဲ အင်တွေဘာတွေ ပညာသားပါပါနဲ့ထုလာတယ်။
ဒီတော့သတင်းက စာချည်းနဲ့ပဲမှန်ကန်ဖို့ သတင်းသမားတွေမှာ
ကျနော်အမုန်းဆုံးက အများပြည်သူတွေ ကြည့်နေတဲ့
မီဒီယာနယ်ပယ်မှန်သမျှမှာ ကလေးပုံတွေနဲ့ ဟာသလိုလို
ကောင်းတယ်။ ဆိုးတယ် ဆိုတဲ့ ကိစ္စတွေက
နေရာတိုင်းမှာ ရှိတတ်ပါတယ် တီတီရေ ….
(မိကျောင်းမင်း ရေခင်းပြတာ မီဟုတ်ဝူးနော်)
ဒီဒေါ့ … စီဂျေ ပျံဖစ်ဂျင်လိုက်ဘာလို့ …
ကောင်းဒေါ စီဂျေ ပေါ့ဂျာ ..
တားဂဒေါ့ ဂလောက်ဘဲ ပေါဒတ်ဒယ် …။
သတင်းသမား ကျင့်ဝတ် ကို ဖောက်ဖျက်ထားတဲ ့သတင်း ဆိုတာ
အတင်းအဖျင်း သာ ဖြစ်ကြောင်းးး
တွေးမိသွားပါတယ် အန်တီ ဒုံရေ
သတင်းမှန်ကြောင်း သက်သေပြနိုင်ဖို ့အတွက် ၊ ကာယကံရှင် အမျိုးသမီးရဲ ့ဓါတ်ပုံ ကို ပြမယ့်အစား
သတင်းဖြစ်စဉ် ကို လှမ်းဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်မယ့်
နယ်မြေခံ တာဝန်ရှိသူတွေ ရဲ ့ဖုန်းနံပါတ်လောက်ပဲ ၊ ဖော်ပြသင့်တယ် လို့ထင်မိပါတယ်
သတင်းသမား ကျင့်ဝတ်လေးတွေ မှတ်သားထားလိုက်ပါတယ်…အန်တီဒုံ
ဘာသတင်းဘဲတင်တင် ကာယကံရှင် ခွင့်ပြုချက်လိုတယ်ဆိုတဲ့ အသိကတော့
ခုနောက်ပိုင်း ဘယ်သတင်းကိုမှ မယုံတော့ဘူး
ပဲခူးမှာ ပြသနာတက်တာကို ပဲခူးရေးရင်ရ ရဲ့သားနဲ့
ရန်ကုန်နဲ့ မိုင် ၅ဝ သာကွားသော ပဲခူး ဆိုတော့
အားလုံးကို ခြုံငုံသုံးသပ်နိုင်အောင် မရေးကြဘူးဗျာ
ပြီးတော့ မီဒီယာ ဖိနှိပ်မှုရပ် တဲ့
မီဒီယာ ဘက်လိုက်မှုရပ် ဆိုပြီး
တချို့ သတင်းတွေဆို လုံးဝ “ဟီးယားဆေး”သက်သက်ပါ
ဆောင်းပါးကောင်းလေးအတွက်…ဗရာဗိုပါ စီဂျေဒုံ ရေ..
ဂဇက်ဒုံ တဲ့ ဟေ့နော်။
သီရိဒုံ နဲ့ မတွေ့လိုက်ဖူးလား။
မီဒီယာ ဆိုတာတွေကတော့ အများပြောကြသလိုဘဲ ဘယ်မှာမဆို အတန်းအစား အမျိုးမျိုးပါဘဲ။
လုပ်စားမီဒီယာတွေ ကတော့ ပိုက်ဆံအတွက် ဘယ်သူ့ကိုမှ ငဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူး။
သတင်းထူး အတွက် သူများ Privacy ကို ထိပါးဖို့ အဆင်သင့်ဘဲ။
ဒီလို သတင်းတွေ ကိုမှ ရွေးဖတ်တဲ့ လူတန်းစားတစ်ရပ် ရှိလို့ လဲ ဒီလို မီဒီယာတွေ အသက်ရှင်နေတာပါ။
သူ့ပရိတ်သတ် နဲ့ သူ ဖြစ်နေမှ တားလို့ ဘယ်လိုမှ မရနိုင်ပါ။
ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ တွေ မှာ “press freedom” တို့၊ “free speech” တို့ နဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့နေရော။
မဟုတ်လို့ကတော့ အဘဖော တစ်ခါပြောဖူးသလို ဒီမိုကရေစီမှာ လိုတာယူ မလိုတာပယ် နဲ့ ပါးပါးလေး ဟိုဘက်ဒီဘက် ကစားနေကြတော့မှာ။
ဒါတင်မက မီဒီယာ ဆိုတာ အစိုးရတွေ လာဘ်မစားအောင်သတင်း တွေက transparent ရှိရမယ် ဆိုတာရဲ့ နောက်မှာ Ethics မရှိတဲ့ မီဒီယာတွေ က အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထိပါးမှုတွေ လုပ်လာတာကိုး။
ဒါကို တားပြန်ရင်လဲ အစိုးရ က သတင်းအမှောင်ချ ထားပြန်ရော။
ဒီမှာတင် Privacy နဲ့ freedom ကြားမှာ balance လုပ်ဖို့ အင်မတန် အရေးကြီးလာတာ။
အဲဒါကို ထိန်းဖို့ ကတော့ အစ်မဒုံ ပြောတဲ့ Ethics နဲ့ အတူ
ကိုယ့် Privacy ကို ထိပါးလာလို့ မကြိုက်ရင် တရားစွဲ ဖို့ တော့ မျှတတဲ့ ဥပဒေကောင်းကောင်း ရှိဖို့လိုတာ အင်မတန် အရေးကြီးတာပေါ့။
ဒီတော့ မျှတတဲ့ ဥပဒေကောင်းကောင်း အတွက် ပထမဦးစားပေး လုပ်ဖို့ က လိုကိုလိုနေပါပြီ။
လက်ရှိ အစိုးရ ကတော့ လုပ်ဖို့လမ်းမရှိ။ လုပ်မှာလဲ မဟုတ်။
ဖွင့်ပေးလိုက်ရင် သူတို့ ပိုင်ဆိုင်မှု တွေ အရင်ပေါ်ကုန် မစိုးလို့။
ဒီတော့ ခေါင်မလုံ မှတော့ အောက်မှာ ဗွက်ထ နေတာ မဆန်းပါဘူး ချစ်သော အစ်မရေ။
ဟိုဘက်မှာ ကထူးဆန်း မေးထားတဲ့
“အစိုးရ မကောင်းတာ ဘယ်သူ့ တာဝန်လဲ” ဆိုတဲ့ မေးခွန်း ကို ဒီမှာ ဖြေ လို့ ရပါတယ်။
အစိုးရ မကောင်းတဲ့ သူ တွေရဲ့ မဟုတ်တာ လုပ်နေတာတွေ ကို မှန်မှန်ကန်ကန် ဘက်မလိုက် ဘဲ ပြည်သူတွေ အတွက် ဖော်ထုတ် ဖို့ က အဆင့်အတန်းမြင့်သော၊ ပညာရှိသော “မီဒီယာ” မှာလဲ တာဝန်အပြည့်ရှိတာပါဘဲ။
မြန်မာပြည်မှာတော့ ဒီလို ပြည်သူ့အတွက် လုပ်ပေးမဲ့ အဆင့်အတန်းမှီ အရည်အသွေးပြည့် မီဒီယာ မရှိသေးလို့ လဲ ဒီအစိုးရ လုပ်ချင်တာ လုပ်နေတာ မဟုတ်လား။
ဟုတ်မလိုနဲ့ သူ့လူ ကိုယ့်ဘက်သား ဖော်လံဖား မီဒီယာတွေ ဖြစ်နေတာ သွားတွေ့လိုက်ရတာ ကိုလဲ စိတ်မကောင်းဘူး။
မီဒီယာ မကောင်းတာကော ဘယ်သူ့ တာဝန်လဲဟင် အရီး …
ပထမ တိုက်ရိုက်တာဝန်ရှိသူက “မီဒီယာ လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်”။
ဒုတိယ သွယ်ဝိုက်တာရှိသူက အဲဒီ မီဒီယာ ကို အားပေးသူများ။
တိုင်းပြည် က သူ တွေပေါ့။
တိုင်းပြည်သား တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကထူးဆန်း မှာလဲ တာဝန်ရှိတယ်။
ဒီတော့ မီဒီယာ မကောင်းတာ “ကထူးဆန်း” တာဝန်ပါဗျို့။
အဲဒီ ကထူးဆန်း မကောင်းတာ ဘယ်သူ့တာဝန်လဲ ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် မှန်ကြည့်မေးပေရော့။
ကထူးဆန်း မကောင်းတာ အရီးလတ် တို့ ကောင်းကောင်း မဆုံးမခဲ့လို့ပေါ့ ..
ကြက်ဥနဲ့ ကြက်မ အစရှာမရသလို ဖြစ်နေပြီ။
တောက်စ် (မူ -ဂဂ)
ဒီလောက်တောင် အဝေးက ဟောင်နေရတာ။
အသံတောင် နာ နေပြီ။
စီစီတီဗွီပိတ်ထားလို့ တွေ့ကြောင်း သက်သေမပြနိုင်တာ။
ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယို သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီသက်မွန်မြင့်နှင့် တညင်သားတို့ ခိုးရာ လိုက်ပြေးကြသည်မှာ ကောလဟာလ သာဖြစ်ကြောင်း တညင်သားမှ ဂဇတ်မီဒီယာ သို့ ပြောကြားသွားသည် မြန်မာနိင်ငံ အကျော်ကြားဆုံး စာရင်းဝင် ကမာ္ဘအသိုင်းဝိုင်းမှ အထင်းကြီးလေးစားရသော လယ်သမားကြီး တစ်ဦးမှ မျိုးရိုးစဉ်ဆက် ဆင်းရဲလာသူ အသက်မပြည့်သေးသော တညင်သားကို ခိုးယူပေါင်းသင်းမှု့အပါအဝင် အမှု့(၃)မှု့ဖြင့် မိခင်ဖြစ်သူမှ သန်လျင်ရဲစခန်း တွင် တယားဆွဲဆို ထားသည်ဟု ကြားသိရသောကြောင့် ရဲစခန်းသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ ဆက်သွယ်မရပေ…..ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယို သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီသက်မွန်မြင့် မှ အသဲနှလုံးတစ်စုံအပါအဝင် အတွင်း ပစ္စည်းအများအပြား ယူဆောင်သွားသည်ဟုသိရပါသည် ..ထိုသတင်းများကို ဂဇတ်မီဒီယာမှ အတည်ပြုချက်မရရှိပေ….. :harr:
ယူအက်စ်မှာဆိုရင်တော့.. မိန်းကလေးက သတင်းမီဒီယာကို တရားစွဲမှာလို့ထင်တယ်..
ဆိုတော့.. နစ်နာကြေးတော်တော်လေးများများကို ပေးရမယ်လို့ထင်တယ်..
ယူအက်စ်မှာဆိုရင်တော့.. နစ်နာကြေး ဒေါ်လာသန်းဂဏန်းလောက်.. ရလောက်တယ်..။
တရားရေးမဏ္ဍိုင်ဆိုတာကြီးက ရှိတယ်.. ရှိရပါတယ်..။
အခုကိစ္စမှာ မိန်းကလေးခမျာ မီဒီယာနှစ်လို့ မိအေးနှစ်ခါ နစ်နာသွားမှန်း
သူရော သူ့ပတ်ဝန်းကျင်ရောမှ ရိပ်စားမိပါစ လို့တောင် ထင်မိပါတယ် သူကြီးရေ။
ဘယ်နေရာမဆို power balance ရှိရပါမယ်။
လွတ်လပ်စွာပြောရေးဆိုခွင့် (မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့်)ရှိရမှာဖြစ်သလို
သူတပါးကို မထိခိုက်စေတဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်လည်းဖြစ်ရပါမယ်။
(ဗိုလ်ချုပ်မိန့်ခွန်းကို ကိုးကားရရင် လွတ်လပ်တယ်ဆိုပြီး လမ်းမပေါ် ဆေးရိုးလှန်းတဲ့ အပြုအမူတွေပါပဲ)
တရားရေး မဏ္ဍိုင်ကြီးကလည်း နေရာယူတာ နှေးလွန်းနေသလိုထင်မိတယ်။
လမ်းလျှောက်တတ်ခါစမှာ လက်တန်းကိုင်ဖို့ သူတပါးလက်ကို ဆွဲဖို့ ရှက်စရာမလိုပါဘူး။
(ကျမတို့ တိုင်းပြည်က တလွဲမာနကြီးနေတတ်တယ်)
ကိုယ့်ရေမြေနဲ့ နီးစပ်ရာကနေ အတုခိုးလိုက်ပါ။
လိုအပ်ရင် ထပ်ပြောင်းဖို့ကိုလည်း ဝန်မလေးပါနဲ့လို့ ဥပဒေပညာရှင်တွေကို တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
e-tone ရဲ့ facebook ကတွေ့တဲ့ သတင်းသမားလေးကိုတော့ အထူးလေးစားဂုဏ်ပြုလိုပါကြောင်း
ပိုက်ဆံ ၂ သောင်း နဲ့ ကျနော် စော်ကားခံလိုက်ရတယ်
ရန်ကုန်တောင်ပိုင်း ခရိုင်ဆည်မြောင်ဦးစီးဋ္ဌာနမှုး ဦးစိုးလွင် က
ပိုက်ဆံ ၂ သောင်းနဲ့ ကျနော် ကို စော်ကားလိုက်တာပါ ။
ကွန်းခြံကုန်း ၊ ကော့မှုး ဘက်က လယ်သမားတွေ
လယ်တွေရေတွေ နစ်လို့ လယ်တွေပျက်စီးကြတယ် ။
ဒါကို နိုင်ငံတော် က ရေကြိီးရလျှှံမှုတွေ ကို လယ်သမားတွေ အတွက်
ရေစီးရေလာကောင်း တဲ့ မြောင်းတွေ ဖောက်ပေးဖို့ ဦးစိုးလွင်တို့ကို
မြောင်းတွေ ဖောက်ပြီးတော့ သတင်းထောက်တွေ ကို ဘန်းပြပြီး
ဒေသခံက လူတွေ နဲ့ သူတို့ မြောင်းဖောက်ပေးတာကြောင့်
လယ်သမားတွေ အဆင်ပြေကြောင်း ၊ သူတို့ က လယ်သမားတွေ
အရေးကို အဓိက ထားဆောင်ရွက်ပေးတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း လက်ဝါးရိုက်ပြီး
ကယ်တင်ရှင် အချိုး ချိုးချင်နေတယ် လေ ။
နိုင်ငံတော် က ဘတ်ဂျက်ချပေးပြီး မြောင်းတွေဖောက်ပေးတဲ့တိုင်
ကွန်းခြံကုန်း က လယ်စိုက်ကွင်း အမှတ် ၄၇၁ ၊ ၄၇၂ က လယ်သမားတွေ
မှာ ရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့် လယ်တွေပျက်စီးနေရတုန်း လယ်သမားတွေအတွက်
ဖောက်ပေးထားတဲ့ မြောင်းကလိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေတုန်း
ဒိသတင်းကို ကျနော် က လယ်သမားတွေ ကို မေးတယ် ။
ရေးလည်း ရေးဖို့တွေးထားတယ် ၊
ဒီသတင်း ကို မင်းမရေးပါနဲ့ တဲ့ .. ဦးစိုးလွင် ကျနော့် ကိုပြောလိုက်တာပါ
နိုင်ငံတော် က ဒီစီမံကိန်းအတွက် ချပေးထားတဲ့ ငွေပမာဏ ကို
စီမံကိန်းပြီးသွားတဲ့ တိုင်တောင် မဖော်ပြနိုင်တာ လယ်သမား ရဲ့
ရင်တွင်းခံစားချက် ကို လည်း သတင်းမရေးပါနဲ့ တဲ့ ဗျာ ..
ည ရ နာရီရောက်တဲ့ တိုင် ကွန်းခြံကုန်းက မပြန်ရသေးတဲ့
သတင်းထောက် တွေကိုယ်စားသီးခံပြီး ငြိမ်နေပေးပါတယ် ။
လှိုင်သာယာရောက်တော့ ထမင်းဆိုင်မှာ ထိုင်နေတဲ့ အချိန်
ကြိုက်တာစား ကြိုက်တာသောက် လုပ်ခိုင်းတယ် ။
ပြည်ထောင်စု့ နေ့စဉ်သတင်းစာ က သတင်းထောက် ပြည့်ဖြိုးအောင် နဲ့
စားသောက်နေတဲ့ သတင်းထောက်တွေ ကို မစောင့်နိုင်တာရယ် ၊ ပြည့်ဖြိုးအောင်
ရုံးပြန်ပြီးသတင်းရေးချင်တယ် ဆိုတာကြောင့် ဆက်စောင့်မနေပဲ ကားငှားပြီး
ဆိုင်က ထွက်လာခဲ့တယ် ။
ဟေ့ကောင်လေးတွေ နေအုံးတဲ့ ။
ဆိုပြီး စာအိတ် တွေ ထဲ က တစ်ယောက် တစ်အိပ်ထုတ်ပေးတယ် ။
ဘာအချိူး ချိူးတာ ဆိုတာ သိပြီးသားပါ ။
အိတ်ထဲက ပိုက်ဆံတွေ ကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးမှ ပဲ
အန်ကယ် ကျနော် သတင်းထောက်လုပ်တာ ဒီလို လာဘ်ပေး လာဘ်ယူ
ကိစ္စ လုပ်ဖို့ သတင်းထောက်လုပ်တာ မဟုတ်ဘူး ဆိုပြီး ပြန်ပေးခဲ့ပါတယ် ။
ကျနော် နဲက အတူတူ ပြည့်ဖြိုးအောင် ကလည်း လိုက်ပို့တဲ့ ကားသမား
ကို စာအိတ်ပြန်ပေးခဲ့တယ် ။
လယ်သမားတွေ အတွက် ချထားပေးတဲ့ မြောင်း ကို ကုန်ကျငွေ ဘယ်လောက်
နဲ့ တည်ဆောက်ပေးထားတာ ပါလို့ မပြောနိုင်ပဲ ပိုက်ဆံ ၂ သောင်း နဲ့
သတင်းထောက်တွေ ကို ပါ အဖော်ခေါ် ပြီး သူခိုးဇာတ်ခင်း စော်ကားလိုက်တယ် ။
လယ်သမားတွေ ( အရိုးခံတွေ ရဲ့ အသံတွေ ကိုပါ သတင်းလုပ် မရေးပါနဲ့တဲ့ )
အိမ်ပြန်ဖို့ အခက်ခဲရယ် ၊သတင်းတင်အောင် ပြန်ရမဲ့ ပြည့်ဖြိုးအောင် ရယ် ကြောင့်
ကျနော် ပိုက်ဆံယူပြီး သတင်းထိန်ချန် ၊ သတင်းရေး တဲ့
ကောင် မဟုတ်ဘူး လို့ပဲပြောခဲ့ပြီး ပဲ ပြန်လာခဲ့တယ်
၂၀၁၃ ဇူလိုင် ၇
ည ၁ဝ နာရီ ၂ဝ မိနစ်